कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमै? ‘मोडालिटी’ फेर्ने बहस
आयोमेल संवाददाता काठमाडौं - शनिबार, भदौ २०, २०७७
आगामी फागुन ७ गतेदेखि १४औं महाधिवेशन घोषणा भएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरु आफ्नो उमेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्न थालेका छन्।
तर, कोरोना संक्रमणको कहर बढ्दै जाँदा महाधिवेशन हुने नहुने अन्योल झनै बढेको छ। र पनि नेताहरु आआफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेका छन्।
महाधिवेशनका लागि पूरा गर्नुपर्ने कामहरु अझैं बाँकी नै छन्। यो बेलामा पार्टी सभापति देउवा भने धमाधम विभागमा मनोनयन गर्न थालेका छन्। सभापति देउवाको यो कार्यशैलीले पार्टीका धेरै नेता असन्तुष्ट छन्।
महाधिवेशनको मोडालिटी फेरौँ : निधि
केही दिन अघि जिपी कोइराला लोकतन्त्र सम्वर्द्धन केन्द्रले आयोजना गरेको जुम छलफलमा बोल्दै कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कोरोना महामारीले गर्दा पार्टीको महाधिवेशन मोडालिटीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
आफूहरू सबै महाधिवेशनको पक्षमा रहेको उनले बताए।
‘सभापतिले पनि मलाई केन्द्रीय सममितिको बैठक जरुरी छ। बैठकमा छलफल भएन भने पौडेल जीहरू पनि मिडियामा गएर आपत्ती जनाइरहनु भएको छ भन्नु भएको थियो’, उनले भने, ‘उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठक भदौमै गर्नुपर्ने भन्नु भएको छ।’
अहिले पार्टीभित्र उठेका विवादहरुका बारेमा छलफल गर्न सभापति देउवा पनि तयार रहेको उनले बताए। रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलासँग छलफल नभएर बैठकको समय तोक्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।
प्रविधिको जमानामा केन्द्रीय समितिको बैठक पनि भर्चुअल नै बसाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
१४औं महाधिवेशनबाट पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्ने वातावरण बन्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘पार्टी भित्र म यसलाई हराउन सक्छु भन्ने हिसावले कोही अगाडि नबढौं। अहिले कम्युनिष्टलाई हराउने बेला हो’, उनले भने।
त्यसका लागि बैचारिक रुपमा क्लियर भएर सिंगो पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने निधिले बताए। ‘१४औं महाधिवेशनबाट सहमतिको आधारमा नेतृत्व ल्याउन सक्यौं भने हामी बलियो हुन्छौं। मैले पार्टी सभापतिलाई पनि यो कुरा भनेको छु’, नेता निधीले भने, ‘जसको नाममा भए पनि सहमतिको प्रयास गरौं।’ दश जना उम्मेद्वार भए भने पनि एकजनाको नाममा सहमति गरौं न।’
फागुनमै महाधिवेशन होला भन्ने लागेको छैन : सिटौला
नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले फागुनमा महाधिवेशन हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताएका छन्।
छलफलमा बोल्दै नेता सिटौलाले केन्द्रीय समितिले फागुनमा महाधिवेशनको मिति तोक्ने बाहेकको अरु केही काम नगरेको आरोप लगाए।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय अनुसारका गतिविधिमा उहाँहरू जुट्नु भएको छैन।
तयारीमा जुट्नुस् शुभकामना छ’, उनले भने, ‘केन्द्रका साथीहरू नै पार्टी नेतृत्वको दौडमा छन्। त्यसैले पहिला महाधिवेशनको ग्यारेन्छि गर्नुस्। त्यो तपाइहरूको नै सफलता हुन्छ।’
उनले पार्टी भित्रका आन्तरिक व्यवहार र निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाए। पार्टी भित्र परिवर्तन नल्याएसम्म बृहत एकता हुन नसक्ने उनको भनाई छ।
‘गोप्य मिटिङ भइरहेको सुन्छु। बाहिर कसैले केही खण्डन गर्दैन’, उनले भने, ‘शेरबहादुरजी र शशांकजी ठ्याक्कै मिलेको हो कि होइन। निधिजीको चर्चा पनि सभापतिका लागि व्यापक छ। म झापामा छु। सञ्चारमाध्यमका कुरालाई कति विश्वास गर्ने? सत्य के हो भनिदिनुस्।’ उनले सत्य कुरा आएपछि आफूले पनि धारणा बनाउने बताए।
सभापति नै महाधिवेशनको पक्षमा हुनुहुन्न जस्तो छ : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले कांग्रेस महाधिवेशन वडादेखि केन्द्रसम्म हुने पार्टीको ‘आम–चुनाव’ भएको बताए। उनले वडा तहबाट नै महाधिवेशनमा होमिनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताए।
उनले त्यसमा पार्टी सभापति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
‘पार्टी सभापतिले महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नु, मेरो असफलता हो भन्नसक्नुपर्छ’ उनले भने।
यतिवेला पार्टी कार्यालयबाट दिनरात खटेर काम गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको नेता थापाको भनाई छ। नेतृत्वको गति महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्नेमा विभाग गठनमा केन्द्रित भएको उनको आरोप छ।
फागुनसम्म कोरोना नियन्त्रण भए पनि भिडभाड गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नसक्ने उनले बताए। यस्तो बेला धेरै जना भिडभाड गरेर महाधिवेशन हुन नसक्ने उनले बताए। ‘त्यसैले महाधिवेशनको तरिका फेर्ने बारे सोच्नुपर्छ’, उनले भने, ‘क्षेत्र–क्षेत्रमा गएर चुनाव गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ।’